News - Popcorn eziokwu
1) Gini na-eme Popcorn Pop? Kernel ọ bụla nke popcorn nwere otu ntapụ mmiri echekwara n'ime gburugburu starch dị nro. (Ọ bụ ya mere popcorn kwesịrị iji nweta 13.5 pasent na 14% mmiri.) Igwe dị nro dị n'akụkụ kernel gbara gburugburu. Ka kernel ahụ na-ekpo ọkụ, mmiri ahụ na-amalite ịgbasa, na nrụgide na-ewulite starch siri ike. N'ikpeazụ, ihu a siri ike na-enye ohere, na-eme ka popcorn "gbawaa". Ka popcorn na-agbawa, starch dị nro n'ime popcorn na-ebuwanye ibu ma na-agbawa, na-atụgharị kernel n'ime. A na-ewepụta uzuoku n'ime kernel, a na-agbapụkwa popcorn!
2) Popdị popcorn ndụ: basicdị isi abụọ nke popcorn ndụ bụ "urukurubụba" na "ero". Kernel urukurubụba buru ibu ma na-efe efe nke nwere ọtụtụ "nku" na-esi na kernel ọ bụla pụta. Mkpụrụ osisi Buttefly bụ ụdị popcorn ndị a na-ahụkarị. Mkpịsị ero ero ahụ dị oke ma nwekọtara ọnụ ma dịkwa ka bọọlụ. Ebube ero ero zuru oke maka usoro nke choro iji kernel mee ihe dika mkpuchi.
3) Nghọta Mgbasawanye: A na-anwale ule mmebawanye na ule Cretors Metric Weight Volumetric Test. Ule a bu ihe anakpo dika ulo oru popcorn. MWVT bụ mmụba nke cubic centimeters nke ọka a na-agbapụta na gram 1 nke ọka a na-egosighị (cc / g). Agụ 46 na MWVT pụtara na gram 1 nke ọka a na-emeghebeghị gbanwere na 46 cubic centimeters nke ọka popped. Nke dị elu karịa nọmba MWVT, nke ka ukwuu na ọka popped kwa arọ nke ọka a na-emegheghị.
4) Sizeghọta Nha Kernel: A na-atụle kernel size na K / 10g ma ọ bụ kernels kwa gram 10. Na nnwale a, a na-atụle gram 10 nke popcorn ma gụọ mkpụrụ ndị ahụ. Ihe kernel ahụ na-agụ na obere obere kernel. Mgbasa nke popcorn adịghị emetụta kernel kpọmkwem.
5) Akụkọ banyere Popcorn:
· Ọ bụ ezie na popcorn nwere ike si na Mexico, ọ toro na China, Sumatra na India ọtụtụ afọ tupu Columbus agaa America.
· A ghọtahiere akụkọ Bible banyere “ọka” echekwara na pyramid nke Egypt. “Ọka” sitere na Bible bụ ọka bali. Njehie ahụ sitere na mgbanwe gbanwere okwu a bụ "ọka," nke na-egosi oke ọka kachasị eji otu ebe. Na England, “ọka” bụ ọka wit, na Scotland na Ireland okwu ahụ na-ezo aka oat. Ebe ọ bụ na ọka bụ “ọka” ndị America, ọ were aha ahụ - wee debe ya taa.
· Okpukpo ọka kachasị ochie a maara bụ nke a na-apụghị ịkọwapụta na nke ifuru ọka nke oge a, na-ekpe ikpe site na fosil dị afọ 80,000 hụrụ ụkwụ 200 n'okpuru Mexico City.
· Ekwenyere na ojiji mbụ eji ọhịa eme ihe na mbido.
· A hụrụ ntị kacha ochie nke popcorn a hụrụ na Bat Cave nke ọdịda anyanwụ nke etiti New Mexico na 1948 na 1950. Site na obere obere penny ruo ihe dị ka sentimita 2, ntị ntị Bat Bat kacha ochie dị ihe dị ka afọ 5,600.
· N’ili ndị dị n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri nke Peru, ndị na-eme nchọpụta achọpụtawo ọka a na-agba pọtụfon ma eleghị anya afọ 1,000. E chebere mkpụrụ ọka ndị a nke ọma na ha ka ga-agbapụta.
· N’ebe ndịda ọdịda anyanwụ Utah, a hụrụ kernel popcorn nke dị otu puku afọ n’otu olulu kpọrọ nkụ nke ndị bu ụzọ Pueblo India bi.
· Otu olili ozu Zapotec nke achọtara na Mexico na ihe dịka afọ 300 AD na-egosi chi Maize nwere akara nnọchi anya popcorn oge ochie n'isi ya.
· A na-ahụkarị popporn poppers - arịa na-emighị emi nke nwere oghere n’elu ya, otu aka na-eme mgbe ụfọdụ ejiri ihe a kpụrụ akpụ chọọ ya mma dị ka pusi, na mgbe ụfọdụ a na-eji ihe ndị e biri ebi etubere ugo n’elu ụgbọ mmiri - achọtala n’ụsọ ebe ugwu Peru laghachi na pre-Incan Mohica Culture nke ihe dị ka 300 AD
· Ọtụtụ popcorn si 800 afọ gara aga siri ike ma dị gịrịgịrị. Kernels n'onwe ya na-agbanwe agbanwe. Ọbụna taa, ifufe na-efepụsị ọzara mgbe ụfọdụ site na olili ozu oge ochie, na-ekpughe ọka nke ọka a gbapụtara na-acha ọcha ma dị ọcha mana ọ dị ọtụtụ narị afọ.
· Ka ọ na-erule oge ndị Europe malitere idozi na “Newwa Ọhụrụ,” popcorn na ụdị ọka ndị ọzọ agbasaruwo agbụrụ nile nke Ala America n’Ebe Ugwu na Ebe Ndịda America, ma e wezụga ndị nọ ná mgbago ugwu na ebe ndịda kọntinent ahụ. A na-etolite ihe karịrị ụdị popcorn 700, a na-echepụta ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ na-adịghị mma, a na-eyi popcorn na ntutu na n'olu. E nwere ọbụna biya biya pọpọ.
· Mgbe mbụ Columbus rutere West Indies, ndị nwe obodo ahụ gbalịrị iresị ndị ọrụ ya popcorn.
· N’afọ 1519, Cortes hụrụ popcorn mbụ ya mgbe ọ wakporo Mexico wee banye na ndị Aztek. Popcorn bụ nri dị mkpa maka ndị Aztek ndị India, bụ ndị jikwa popcorn mee ka ihe ndozi maka akwa isi, olu na ihe ịchọ mma na ihe oyiyi nke chi ha, gụnyere Tlaloc, chi ọka, mmiri ozuzo na ọmụmụ.
Ihe ndekọ mbụ nke Spanish banyere ememe na-asọpụrụ chi ndị Aztec, bụ́ ndị lekọtara ndị ọkụ azụ̀, kwuru, sị: “Ha gbasasịrị n’ihu ya ọka kpọrọ nkụ, a na-akpọ momochitl, ụdị ọka na-agbawa mgbe ọ kpọrọ nkụ ma kọwaa ihe ndị dị na ya ma mee onwe ya ka ọ dị ka ifuru na-acha ezigbo ọcha ; ha kwuru na ha bụ akụ mmiri igwe e nyere chi nke mmiri. ”
· Mgbe ọ na-ede akwụkwọ banyere ndị India Peruvia na 1650, onye Spaniard Cobo na-ekwu, “Ha na-akọ otu ụdị ọka ruo mgbe ọ gbawara. Ha na-akpọ ya pisancalla, ha na-eji ya dị ka ihe na-enye obi ụtọ. ”
· Ndị na-eme nchọpụta n’oge French site na mpaghara Great Lakes (ihe dị ka 1612) kwuru na Iroquois wepụtara popcorn n’ime ite ite nwere aja aja wee jiri ya sie ofe, tinyere ihe ndị ọzọ.
· Ndị England chịrị na-achịbata webatara popcorn na mmemme mmemme inyeaka mbụ na Plymouth, Massachusetts. Quadequina, nwanne nwoke onye isi Wampanoag bụ Massasoit, wetara akpa deerskin nke ọka a gbapụtara agbapụta na onyinye dị ka onyinye.
· Ndị Ala America ga-eweta “nri nri” popcorn na nzukọ ha na ndị England na-achị obodo dị ka akara nke ihu ọma mgbe mkparịta ụka udo.
Ndị nwunye ndị bi na Colonial jere ozi pọpọpọ na shuga na ude maka nri ụtụtụ - nke mbụ “afụ ọnụ” ọka ụtụtụ nke ndị Europe riri. Fọdụ ndị na-achị colon na-eji ọka silinda nke obere mpempe akwụkwọ na-agba ọsọ na axle n'ihu ekwú ọkụ ahụ dị ka nnụnụ squirrel.
· Popcorn ama ewu ewu site na 1890 ruo mgbe Oké Ndakpọ Akụ. Ndị na-ere ahịa n'okporo ámá na-agbaso ìgwè mmadụ gburugburu, na-akwagharị paịlị ma ọ bụ gas nwere ike site na ngosi, ogige ntụrụndụ na nkwupụta.
· N'oge ịda mba, popcorn na 5 ma ọ bụ 10 cents akpa bụ otu n'ime obere okomoko ezinụlọ na-apụ apụ nwere ike ịkwụ ụgwọ. Ọ bụ ezie na azụmaahịa ndị ọzọ kụrụ afọ n'ala, azụmahịa popcorn gara nke ọma. Onye ọkaiwu Oklahoma bụ onye gara mebiri mgbe ụlọ akụ ya dara zụta igwe popcorn wee bido azụmaahịa na obere ụlọ ahịa na nso ebe ihe nkiri. Ka afọ ole na ole gachara, azụmaahịa ọ na-akụ popcorn nwetara ego zuru ezu iji zụtaghachi atọ n'ime ugbo ndị furu efu.
· N’oge a na-alụ Agha Worldwa nke Abụọ, e zigara shuga na mba ofesi maka ndị agha US, nke pụtara na ọ nwere ọtụtụ shuga fọdụrụ na States ime swiiti. N'ihi ọnọdụ a na-adịghị ahụkebe, ndị America riri okpukpu atọ karịa popcorn dị ka ọ dị na mbụ.
· Popcorn banye na mkpọmkpọ mbido 1950, mgbe igwe onyonyo ghọrọ ewu ewu. Ndị bịara n'ụlọ ihe nkiri sinima wee daa, were ya, nri popcorn. Mgbe ọha na eze malitere iri popcorn n'ụlọ, mmekọrịta ọhụrụ dị n'etiti televishọn na popcorn dugara na mbido nke ewu ewu.
· Microwave popcorn - nke mbụ ejiri microwave kpo oku na 1940s - agụtala $ 240 nde kwa afọ popcorn US na 1990s.
· Ndị America taa na-eri ijeri ijeri popu 17.3 nke popuporn popuporn kwa afọ. Onu ogugu ndi America na-eri ihe dika 68.
Post oge: Apr-06-2021
Caramel popcorn, China Prefabricated Klas, Ọka agbara agba, INDIAM popcorn,